မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: သတ္တိနဲ့ ရပ်တည်နေသူ သို့ မဟုတ် လူရွှင်တော် “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
Uploaded by thadarmay. - News videos hot off the press.
ကိုဇာကနာရဲ့ ၅၀ နှစ်မြောက်ရွှေရတု ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်ပါ။
ရေးဖွဲ့ မှတ်တမ်းတင်သူက သက်ဦးနိုင် ဖြစ်ပြီး တေးဂီတ shambala အဖွဲ့ က တီးခတ်ထားပါတယ်။
အသံချိုချို ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ မသူသူနဲ့ စိန်သွားက သီဆိုထားပါတယ်။
ဖန်တီး တည်းဖြတ်သူ မသဒ္ဓါပါ ခင်ဗျာ။
Posted by အာဇာနည် at 7:10 AM